Guddida Fulinta Kulmiye Oo Madaxweyne Siilaanyo U gudbisay Qoddobo U Dan Ah, Muuse Biixina Qudh-gooyo Ku Ah | Burco Media
Guddida Fulinta Kulmiye Oo Madaxweyne Siilaanyo U gudbisay Qoddobo U Dan Ah, Muuse Biixina Qudh-gooyo Ku Ah
Hargeysa(BM) guddida fulinta Xisbiga Kulmiye ayaa la sheegayaa Madaxweyne Siilaanyo in ay u gudbiyeen illaa toddoba qoddob oo ay sheegeen in uu ku qabsoomi karo shirweynaha Xisbiga Kulmiye isla markaana lagaga badbaadi karo khilaafka dhex yaala oo illaa hada aloosan.
Sida ay waaheen wararka ku heshay waxa jira kulamo is-daba joog ah oo Garabyada Xisbiga Kulmiye wali ku naaqishayaan halka looga soconayo go’aankii Madaxweyne Siilaanyo iyo beeshiisu ku go’doomiyeen hanaankii dimuquraadiyadeed ee Xisbigu ku socday taasoo illaa hada wali lugooyadeedii hortaagan tahay qabsoomida shirweynihii loo balansanaa iyo hawshii qaban qaabadiisaba.
Qoddobada Guddida fulinta u gudbisay Madaxweyne Siilaanyo waxa la sheegay in ay ka mid yihiin qoddob Dan u ah Madaxweyne Siilaanyo iyo C/raxmaan Saylici kaasoo ah in aan labadooda mid koodna lagula tartami doonin doorashada Madaxtinimada ee soo socota oo la qaban doono laba bilood ka bacdi shirweynaha xisbiga Kulmiye.
Sidoo kale waxa la sheegay qoddobada nuxur ahaan ay ku soo jeediyeen talooyinkooda ee loo gudbiyey Madaxweyne Siilaanyo isla markaana uu qaatay dhaqan gelintooda ee ay u arkaan in ay Dan u tahay Xisbiga iyo qabsoomida shirweynaha in ay tahay inaan wax muran iyo faragalin ah toona lagu samayn guddida qaban qaabada ee Guddoonka xisbigu magacaabay, guddida fulintuna ansixisay. Waxbana aan laga beddeli Karin xubnaheeda maadaama uu yahay go’aan guddi fulineed, go’aan guddi fulineedna waxa lagu bedeli karaa oo kaliya uu yahay go’aan golle dhexe, sidoo kale hogaankooda ay sifaha sharciga ah ku doorteen aan isna la fara gelin, xubnaha ka soo horjeeda ee ka mid ka ahna sidaa lagu war-geliyo si ay ula shaqeeyaan.
Sidoo kale, waxay Madaxweyne Siilaanyo u gudbiyeen qoddob kale oo taabanaya In maadaama isu tanaasul iyo is afgarad lagu dhameeyey jagada guddoomiyaha xisbiga, qaybaha kale ee dhismaha xisbagana sidaa si la mid ah debedda loogu sii dhameeyo, sida shirguddoonka shirweynaha xisbiga, hogaanka xisbiga, golaha dhexe ee xisbigaiyo guddida fulinta ee xisbiga tiradooda iyo xubnahoodaba, si shirweynaha xisbigu u noqdo mid si habsami ah u dhaca una fududaada dhaqaale ahaan iyo waqti ahaanba. Qodobkan ujeeddadiisu waxa weeyi in xubnaha kale ee hogaanka, kuwa Golaha dhexe iyo kuwa guddida fulinta ee hadda jooga iyagana sidooda loo daayo.
Qoddob kale oo ay u arkeen in uu muhiim u yahay qabsoomida shirweynaha ayay ku sheegeen In ay caddaato in inta lagu guda jiro marxaladda diyaarinta shirweynaha xisbiga ay masuuliyadda iyo awoodda xisbiguba dusha ka saaran tahay guddida fulinta ee xisbiga
Si looga badbaado muranka ka dhasha in markasta la isku khuukhiyo in nin xil hayaa olole u galo madaxtinimada Dalka eek a mid ah Golaha Wasiiradda ama Hogaanka Kulmiye waxay yidhaahdeen In xeerka lagu caddeeyo in xubin kasta oo xisbiga dhexdiisa uga tartamaysa jagada musharaxa madaxweynaha taas oo xil wasiirnimo ka haysa xukuumadda am aka mid hogaanka xisbigaba toddoba maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta lagu dhawaaqo qabsoomidda shirka golaha dhexe ee lagu soo xulayo musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Qoddob kale oo la sheegay in uu ka mid ahaa talooyinka ay kaga bogsan karaan tanaasulkii Samaale waxay yidhaahdeen waa In musharaxa tanaasuley (C/casiis Maxamed Samaale) uu si toos ah uga mid noqdo golaha dhexe ee xisbiga iyo Guddida fulinta inta u dhaxaysa shirweynaha hadda qaban qaabadiisu socoto iyo shirweynaha ku xigi doona.
Ugu danbayntii qoddobka ay ku soo gunaanadeen go’aamada ay Madaxweyne Siilaanyo u gudbisay guddida fulintu waxa uu ahaa in la cadeeyo in ujeedada codsiga Madaxweynaha iyo ogolaanshaha aanu ogolaanayba aanu macnaheedu ahayn mid looga faa’iidaysan karo dadkana loogu sheegi karo in uu Muuse Biixi yahay Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Kulmiye.
Qoddobadan ayaa u muuqda in ay muujinayaan khilaafkii xisbiga Kulmiye in uu wali laalan yahay oo aan xal kama danbaysa ah laga gaadhin isla markaana ay garabyadu kala joogaan darafyo aan isku dhaweyn.